China GS Hot Slip Polyolefin Shrink Film orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | GS PACK
Hetezo ny fahalalana sarimihetsika
Ny sarimihetsika G SHot Slip Polyolefin Shrink dia manana toetra tsara rehetra amin'ny sarimihetsika P OF mahazatra mihena, mandritra izany fotoana izany dia manana toetra mahamay mafana. Izay nampiasaina indrindra hamahana ny olana momba ny hazo vokatry ny maripana havia aorian'ny hafanana nopetahana teo amin'ny sehatry ny horonantsary mafana mandritra ny fizotran'ny paosin-doha mafy. Azo zahana InGS ： 12 micron, 15 micron, 19 micro n 、 25 micro n 、 30 micron
Ny sarimihetsika G SHot Slip Polyolefin Shrink dia manana toetra tsara rehetra amin'ny sarimihetsika P OF mahazatra mihena, mandritra izany fotoana izany dia manana toetra mahamay mafana. Izay nampiasaina indrindra hamahana ny olana momba ny hazo vokatry ny maripana havia aorian'ny hafanana nopetahana teo amin'ny sehatry ny horonantsary mafana mandritra ny fizotran'ny fametahana entana mafy. Ny mikitroka azo ampiasaina InGS ： 12 micron, 15 micron, 19 micro n, 25 micro n, 30 micron.
zavatra Unit Fomba fitsapana Toetra ara-batana
hateviny micron ASTM-D 374 12um 15um 19um 25um
hakitroky g / cm3 ASTM-D 1505 0,92 0,92 0,92 0,92
Elongation MD % ASTM-D 882
Faharetana amin'ny sintona MD N / mm2 ASTM-D 882
Fanoherana ny ranomaso MD N ASTM-D 1938
Tombo-kase N / 15mm Q BT 23-58 10 11 13 15
Dynamic ASTM-D 1894 0.23 0,19 0,18 0,19
voasakantsakan'ny 0,24 0,20 0,19 0,20
Static (Hot slip)
@ 60 ℃ -01 0,27 0,24 0.23 0.23
Diameter anatiny santimetatra 3 3 3 3
Fanamarihana: MD (Làlan'ny masinina) ， TD (Toro lalana andininy)
Shrink film (POF) dia karazan'akan-fonosana miendrika tontolo iainana miaro ny tontolo iainana. Ny sarimihetsika mihena dia mandray teknolojia fanodinana volo roa, miaraka amin'ny polyethylene ambany ambany (LLDPE) ho fitaovana afovoany, ary polypropylene copolymer ternary ho sosona anatiny sy ivelany. Ny fitaovana dia vita amin'ny fiaraha-miasa extrusion telo sosona. Ny POF dia manana toetra miavaka amin'ny mangarahara avo, tahan'ny fihenam-bidy avo lenta ary fampisehoana tombo-kase hafanana tsara. Izy io koa dia manana tombony sy tombony amin'ny sarimihetsika polyethylene sy sarimihetsika polypropylene, noho izany ny fahombiazan'ny vokatra dia mihoatra ny polypropylene fotsiny.
Ny horonantsary vinina sy ny sarimihetsika polyethylene dia nampiroborobo sy nampiharina tamin'ny tsena iraisam-pirenena. Ny tombony azo amin'ny sarimihetsika POF dia: ny fihenan-dàlana avo, ny gloss avo lenta, ny mangarahara avo, ny fahombiazan'ny haingon-trano amin'ny vokatra, ny fahaiza-manatsara, ny mari-pana ambany ary ny tsy fitehirizana, tsy mora antitra, ny hakitroky ny vokatra ambany ary afaka mampihena ny vidin'ny fonosana;
Fampisehoana famehezana hafanana miavaka, herin'ny famehezana avo, fanoherana ny ranomaso tsara, fanoherana ny puncture, rindrambaiko malalaka, mety ho an'ny semi-automatique, fitaovana feno fonosana haingam-pandeha haingam-pandeha sy fonosana tanana; mifanaraka amin'ny fenitry ny FDA ny vokatra, tsy misy poizina, sariaka amin'ny tontolo iainana, ary azo ampiasaina amin'ny sakafo Famokarana fonosana vokatra isan-karazany toy ny fanafody. Ny POF dia ampiasaina amin'ny famonosana dite ronono, paty eo no eo, paty maina, boky, zavakanto, kojakoja ilaina isan'andro, sns.
Previous: GS malefaka sy ambany maripana P NY hampihena ny sarimihetsika
Manaraka: GS Super 10 Micron Polyolefin Shrink Film
Hamafana ny Film Polyolefin Shrink
Sarimihetsika famonosana hafanana polyolefin
Sarimihetsika Plastika Plastika Polyolefin
Sarimihetsika fonosana Polyolefin Shrink Wrap
Mpanamboatra fonosana fitaovana mangarahara Pla ...
GS malefaka sy ambany maripana P NY hampihena ny sarimihetsika
Mihena ny polyolefin mafana vita amin'ny mpamokatra ...
Custom 10-35 microns eco-friendly plastika pof t ...
Loko mangarahara 23 Micron LLDPE Stretch Film ...
Ny hafanana POF voaforona mangarahara avo dia mihena ...
Famonosana Polyolefin Pof Shrink, Mihena horonan-tsary horonan-tsary, Temperature famonosana polyolefin, Sarimihetsika Polyolefin Pof Shrink, Horonan-tsarimihetsika Vs Shrink Wrap, Mitete Film Pvc,